> Resource > Video > WeVideo: Si fudud Abuur Videos Online
Haddii aad raadineyso weeyna codsiga internetka ah si ay u abuuraan iyo edit aad videos, WeVideo laga yaabaa inay tahay waxa aad u baahan tahay. Tani online madal aad u saamaxaaya in ay abuuraan videos daruurta. Taasi micnaheedu waa in, feature walba waa la heli karo online, sidaa darteed uma baahnid in aad kala soo bixi software kale. Hoos waxaa ku hage karaa laga bilaabo u WeVideo ah. Waxaa soo raaca in si fudud loo abuuro videos online.
1 Aayad in WeVideo
Waa lacag la'aan ah si aad u bilowdo la WeVideo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sameeyaan xisaab oo siinaya cinwaanka email ah, iyo in la abuuro username iyo password. Waxa kale oo aad isku diiwaan gelin kartaa in aad usii Facebook, Yahoo ama xisaab Gmail.
2 dejinta photos videos ama si aad u WeVideo
Markaas riix Upload Media ee Storyboar d tab ama tag ah Upload tab in ay dajiyaan ee photos iyo video clips ka computer ama warbaahinta xisaab-aad. Waxa kale oo aad ku dhacay karaa Record iyo xiriiriyaan qalab camera u gaar ah si ay u qoraan video clip ah.
Talo: WeVideo bixisaa saddex hababka tafatirka (Storyboard, Standard Timeline iyo Advanced Timeline). Waxaad bedeli kartid hababka adigoo gujinaya icon saddexagalka ee geeska kore ee midig ee shaashada ku Tifaftiraha.
3 Poland WeVideo abuurka aad
Ka dib markii in, jiidi oo hoos u waxyaabaha aad si kasta oo aad rabto. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka abaabuli waxyaabaha aad. Markaasay aad xaalkaa video sida aad jeceshahay. Tusaale ahaan, waxaad jar kartaa video clips in ay diiradda saaraan qaar ka mid ah waqtiyo muhiim ah ama kala gooyay video dheer galay kuwa yar yar. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka, saamaynta, music, iyo muuqaallo aad videos. Ama waxaad tagtaan dalka Mowduuca tab in lagu daro qaar ka mid ah mawduucyada hal abuur leh si aad u abuurista.
3 naadiya aad videos
Markii uu dhamaystay abuurkiinna, u tag naadiya si toos ah geliyaan aad videos in YouTube, Google Drive, Facebook, iyo Twitter. Xataa waxaad ka bedeli kartaa qaraarka video ama aragti aad content ee dhigay doorashada fursadaha sida "gaar ah ama dadweynaha".
Inkastoo WeVideo bixisaa qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka aasaasiga ah, waxaa jira waxyaalo badan oo ku sugan video tifaftirayaasha desktop in WeVideo ma bixiyaan, sida mooshin gaabis ah oo degdeg ah iyo xil-buuqa, la magacaabo wax yar. Haddii aad rabto in la abuuro video ah oo khibrad dheeraad ah, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Tani user saaxiibtinimo qalab video tafatirka ayaa farabadan oo ka mid ah qaababka gaar ah oo laguu ogolaado in aad si fudud isugu wada aad video clips, qoraalka iyo music. Waxaad ka codsan kartaa saamaynta kala duwan sida filtarrada, sawir-in-sawir, kala guurka ah iyo qaar badan si aad u hesho sugaya xirfadeed ka mid ah aad videos in daqiiqo Diintooda. Halkan waxa aad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Video Editor this.